ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကူးစက်နိုင်တဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ။ - Page 10 of 27 - Hello Sayarwon
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။4ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ (STDs) တော်တော်များများက လိင်အင်္ဂါမှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကွန်ဒုံး (သို့မဟုတ်) dental dam လို့ခေါ်တဲ့ ၆ လက်မ ပတ်လည်ခန့် စတုရန်းပုံ ရော်ဘာ အပြားလေးတွေလို အကာကွယ် နည်းလမ်းသုံးခြင်းက လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ တခြား လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံစံတွေထက် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ခြေ နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ မကြာခဏ အကာကွယ်မဲ့ဆက်ဆံမိနေရင်
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ ပါးစပ်၊ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျှာတို့ကို အသုံးပြုပြီး လိင်တံကို လှုံဆော်ပေးခြင်း (fellatio) နဲ့ အမျိုးသမီး အင်္ဂါကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း (cunnilingus) နဲ့ စအိုကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း (anilingus) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ အရွယ်ရောက်သူတွေ အများစု လုပ်တတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လိင်ကွဲကြိုက်နှစ်သက်သူတွေနဲ့ လိင်တူ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေလည်း လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
လေ့လာချက်တွေအရတော့ အနောက်နိုင်ငံမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ အရွယ်ရောက်သူ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိက သူတို့ရဲ့ဘဝမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၂၀၀၇ ကနေ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း လေ့လာခဲ့တဲ့ လေလာချက်တစ်ခုမှာတော့ ဆယ်ကျော်သက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၁၇ နှစ်အတွင်းရှိသူ လူငယ်ယောက်ျားလေးနဲ့ အမျိုးသမီး ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်လိင်နဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ STD တွေ ပြန့်ပွားနိုင်သလား။
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ (STD) နဲ့ တစ်ခြားသော ကူးစက်ရောဂါတွေဟာ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါရှိတဲ့သူနဲ့ ဆက်ဆံမိသူတိုင်း STD ရောဂါတွေကို ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လိင်အင်္ဂါနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းတို့ကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်ကနေ လိင်ဆက်ဆံရင်း STD ရောဂါ ဘယ်လောက်ကူးစက်နိုင်သလဲ ဆိုတာကတော့ အောက်ပါအချက်တွေပေါ် မူတည်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါတွေက
– လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တဲ့ရောဂါ အမျိုးအစား၊
– လိင်ဆက်ဆံမှုကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်၊
– အဖော်ဖြစ်သူမှာ ဘယ်လို လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေသလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့
– ဘယ်လို လိင်မှု ကိစ္စတွေကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရင်း အဖော်ဖြစ်သူရဲ့ လိင်အင်္ဂါကနေ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဖော်ဖြစ်သူရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းမှာ ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်း လိင်တံ၊ မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းတို့မှာ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါ၊ နှစ်မျိုးစလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေဟာ ကူးစက်ခံထားရတဲ့သူဆီမှာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ မပြနေဘူးဆိုရင်တောင် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူနာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုရင် လက္ခဏာ မပြတဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်လို လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေက ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်သလဲ။
၁။ Chlamydia ရောဂါ
Chlamydia ရောဂါ ရှိသူနဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရင် ဒီရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့နေရာတွေက လည်ချောင်း၊ လိင်အင်္ဂါများ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာ မပြတတ်ဘဲ ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါမှ အညစ်အကြေးများဆင်းခြင်း၊ ဆီးသွားချိန် ပူစပ်ခြင်းနဲ့ ဝှေးစေ့များရောင်ကိုင်းခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဆီးပူညောင်းကျ(ဂနို)ရောဂါ (Gonorrhea)
ရောဂါ ရှိသူနဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမိရင် ရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ ပါးစပ်၊ လိင်အင်္ဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာ မပြတတ်ဘဲ ပြပြီဆိုရင် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါများမှ အရည်များဆင်းခြင်း၊ ဆီးသွားချိန် နာကျင်ခြင်း၊ ဝှေးစေ့များ ရောင်ကိုင်းလာခြင်း၊ စအိုလမ်းကြောင်း နာကျင်ခြင်းနဲ့ အရည်များထွက်ခြင်းတို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၃။ syphilis ကာလသားရောဂါ
လိင်အင်္ဂါများ (သို့မဟုတ်) စအို နားမှာ ဆစ်ဖလစ် အနာနဲ့ အဖုအပိမ့်များ ရှိနေတဲ့ အဖော်ဖြစ်သူနဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင် ဆစ်ဖလစ် ကာလသားရောဂါ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ ဆစ်ဖလစ်အနာများ ရှိနေတဲ့ အဖော်ဖြစ်သူရဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံပေးခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရင်လည်း ဆစ်ဖစ်လစ်ရောဂါ ရနိုင်ပါတယ်။ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ပထမဆုံး ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လိင်အင်္ဂါများ၊ စအိုနဲ့ စအို လမ်းကြောင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာမရှိဘဲ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ အရေပြား၊ လိင်အင်္ဂါနဲ့ စအိုနားတစ်ဝိုက်မှာ နာကျင်မှု မရှိတဲ့ အနာတစ်ခု (ဒါမှမဟုတ်) အနာများပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုံး၊ လက်များနဲ့ ခြေထောက်ပြင်တို့မှာ အနီကွက်များပေါက်နိုင်ပြီး တုပ်ကွေးလို ရောဂါမျိုးကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
၄။ရေယုန် (herpes simplex virus types 1၊ 2)
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ဆက်ဆံပေးတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်ဆံခံရတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ နှုတ်ခမ်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လိင်အင်္ဂါ ဧရိယာနားတစ်ဝိုက်၊ စအို၊ စအိုလမ်းကြောင်းနဲ့ တင်ပါးတို့တွေမှာ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရေယုန်တွေဟာ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ ပြလေ့ မရှိဘဲ စစချင်းမှာတော့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ ဖျားနာခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပြီး နာကျင်ပြီး ယားယံတဲ့ အနာလေးတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ရေယုန်တွေအတွက် ကုသစရာ ဆေးမရှိဘဲ ဗိုင်းရပ်စ်များကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့ ရေယုန်တွေ ပိုဆိုးလာခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၅။ လိင်အင်္ဂါအသားပိုကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့HPV (human papillomavirus)
HPV ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတဲ့သူနဲ့ ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် လိင်ဆက်ဆံခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ လိင်အင်္ဂါ ဧရိယာများ၊ မွေးလမ်းကြောင်း၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ စအိုနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာပြလေ့မရှိဘဲ ပြလာပြီဆိုရင် လည်ချောင်းမှာ အသားပိုများ ဖြစ်လာခြင်း (ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ အသံပြောင်းလာခြင်း၊ စကားပြောရခက်လာခြင်းနဲ့ အသက်ရူရခက်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။) လိင်အင်္ဂါနဲ့ စအိုနားတစ်ဝိုက်တွင် အသားပိုများထွက်လာခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ လေ့လာမှသာတွေ့နိုင်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်း၊ သားအိမ်ခေါင်းနဲ့ စအိုရှိဆဲလ်တွေ အတွင်းမှာ မူမမှန်ပြောင်းလဲမှု များဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါသားပိုတွေကို ကုသရင် ခွဲစိတ်မှုတွေနဲ့သာ အသားပိုတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတော့ မကုသနိုင်ပါဘူး။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားနိုင်ပါတယ်။
၆။HIVဗိုင်းရပ်စ် (human immunodeficiency virus)
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မွေးလမ်းကြောင်းဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့ စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ထက် HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ခြေနည်းပေမဲ့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် HIV ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့ပွားရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတာတစ်ခုက ကူးစက်ခံထားရတဲ့ အဖော်ဖြစ်သူရဲ့သွေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထွက်အရည်တွေထဲမှာ ရှိတဲ့
ဗိုင်းရပ်စ် ပမာဏ (viral load) ဖြစ်ပါတယ်။ HIV ဗိုင်းရပ်စ် နည်းနေမယ်ဆိုရင် HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ခြေ နည်းနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့နေရာကတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ရှိ ကိုယ်ခံအားစနစ် တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်အကြာကြီး ရောဂါ လက္ခဏာ မပြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ပြတယ်ဆိုရင်လည်း တုပ်ကွေးကဲ့သို့သော လက္ခဏာတွေ ပြနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ HIV ဗိုင်းရပ်စ် အတွက် ကုသနည်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒီရောဂါကလည်း ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရင် ဆက်ဆံတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်ဆံခံရတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကူးစက်ခံရနိုင်တဲ့ နေရာတွေကတော့ မွေးလမ်းကြောင်း၊ လိင်တံ၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစချင်းတော့ ဘာလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ပြလာတဲ့အခါမှာ မွေးလမ်းကြောင်း၊ လိင်အင်္ဂါမှာ စွန့်ပစ်အရည်များဆင်းခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်းနီရဲလာခြင်း၊ မွေးလမ်းကြောင်း ယားယံလာခြင်း၊ ဆီးသွားချိန် ပူစပ်ခြင်းတို့ကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ trichomoniasis ရောဂါကို ကုသလို့ ရပါတယ်။
အထက်မှာပြထားတဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ အပြင်တခြား ကူးစက်ရောဂါတွေ ဖြစ်တဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါ A (hepatitis A virus)၊ Shigella နဲ့ အူလမ်းကြောင်းကပ်ပါးကောင် (amebiasis) တို့ဟာလည်း စအိုကို ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းက မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ ထက်စိတ်ချရရဲ့လား။
လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါ (STDs) အများစုဟာ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မတူညီတဲ့လိင်ဆက်ဆံပုံတွေကနေပြီး ဘယ်လောက် ရောဂါ ကူးစက်နိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ အတိအကျပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူအများစုဟာလည်း မွေးလမ်းကြောင်းဖြင့် စအိုဖြင့်လည်း လိင်ဆက်ဆံတတ်ကြလို့ပါ။
လေ့လာချက်တွေ အရတော့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ထက် HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုနည်းတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်က HIV ဗိုင်းရပ်စ်အတွက်သာ ဖြစ်ပြီး တခြား လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ အတွက်တော့ မှန်မနေ နိုင်ပါဘူး။
ဥပမာ လေ့လာချက်တစ်ခုအရ ဆစ်ဖလစ်ရှိတဲ့ လိင်တူ ချစ်သူ အမျိုးသား တွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ ၅ ယောက်အနက် ၁ ယောက် ပါးစပ်ဖြင့်သာ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ စအိုတို့ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ထက် အန္တရာယ်နည်းနိုင်ပေမဲ့ ကူးစက်နိုင်ခြေ ရှိပါသေးတယ်။
Chlamydia နဲ့ gonorrhea တို့ လည်ချောင်းမှာ ကူးစက်ခံထားရခြင်းက လိင်အင်္ဂါတွေနဲ့ စအိုလမ်းကြောင်းမှာ ကူးစက်ခံထားရခြင်းလောက်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ခြေကို ပိုမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆစ်ဖလစ်တို့ HIV တို့ကတော့တစ်ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်နေရာကနေ ရရ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ STD တွေ ရနိုင်ခြေကို ပိုများစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ။
အောက်ပါအချက်တွေ ဖြစ်နေရင်တော့ ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ HIV နဲ့ တစ်ခြား STD တွေရနိုင်ခြေကို ပိုများလာစေနိုင်ပါတယ်။ –
– ခံတွင်းကျန်းမာရေး ဆိုးရွားပြီး သွားပျက်ဆီးနေခြင်း၊
– သွားဖုံးပျက်ဆီးနေခြင်း၊ သွားဖုံးမှ သွေးထွက်နေခြင်း နဲ့ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်နေခြင်း
– ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေမှာ အနာများပေါက်နေခြင်း၊
– အဖော်ဖြစ်သူရဲ့ သုက်မထွက်ခင် အရင်ထွက်သော အရည်ကြည်များနဲ့ ထိတွေ့မိခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ တစ်ဆင့် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ မကူးစက်တော့အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကနေ STD တွေ ကူးစက်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချဖို့ အတွက် ကွန်ဒုံးနဲ့ dental dam တို့ကို လိင်ဆက်ဆံတိုင်း အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။
STD တွေ ကူးစက်နိုင်ခြေကို အပြည့်အဝ ကာကွယ်ဖို့အတွက်တော့ မွေးလမ်းကြောင်း၊ စအိုနဲ့ ပါးစပ်တို့ကနေ လိင်ဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့ပါပဲ။ မလုပ်ရင် အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှု ပုံမှန် ရှိနေသူတစ်ယောက်ဆိုရင်
– STD ရောဂါများကိုစစ်ဆေးထားပြီး ရောဂါမရှိတဲ့အဖော်ဖြစ်သူနဲ့ တစ်လင်တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးခြင်း၊
– လိင်ဆက်ဆံချိန်တိုင်း ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခြင်းတို့နဲ့ ကူးစက်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်က STD တွေမှာ ဘာရောဂါ လက္ခဏာမှ မပြတတ်တာကြောင့် ကူးစက်ခံထားရသူကလည်း သူတို့ မကူးစက်ခံရသေးဘူးထင်ပြီး သင်ထံ STD ရောဂါတွေကို ကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေသူတစ်ယောက်ဆိုရင် HIV ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ STD တွေ အတွက် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပြီး အဖော်ဖြစ်သူကိုလည်း STD တွေ စစ်ဆေးထားသလားဆိုတာကို သေချာအောင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာ STD ရှိနေမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံတာကိုရပ်ပြီး နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းမှာ ပြသပြီး စစ်ဆေးကုသနိုင်ပါတယ်။
Accessed (8. December. 2018)
ပါးစပ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ရဲ့ အကောင်းအဆိုးများ